Uto bụ nne nke ihe niile mepụtara.
Ọ bụghị otú a ka okwu ochie si aga, kama n’ụwa taa, ogo maka ulo oru ntanetị bụ ihe dị mkpa.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ime nke ọma, mgbe ahụ ị ga – achọrịrị ụzọ iji zụlite azụmahịa gị Nweghi ike izu ike n’ọrụ gị, af ju ju afọ gị n’ihe ị rụzuru. Ọ bụrụ na ị na-eche na ihe ọ bụla ị rụzuru ugbu a, yabụ ọdịnihu gị agaghị adị!
Utu häkkimine bụ okwu a na-atụfu ugboro ugboro n’ụbọchị ndị a. Uto na – ewe oge, ma ụfọdụ ndị na – achọta ụzọ ha ga – esi mee ngwa ngwa ka ha wee nwee ike ịba ụba ego ha na ahịa ha na ọkara oge.
Ịgba egwu na ịzụlite azụmahịa gị abụghị site n’ọchịchịrị. Ọ na-achọta ọtụtụ ihe ọmụma banyere ahịa gị, nghọta dị mma nke ndị na-ege gị ntị, na ịmatakwu nke azụmahịa gị tupu ị nwee ike ịsọ ọsọ-gaboo nzọ esizọ Ọ bụghị n’ụzọ kachasị mfe ka ọ ga-aga nke ọma, mana ịbawanye uru bụ na ọ bụ ihe kacha akwụ ụgwọ.
0.1 Tagasi ọ bụla ibu häkker bụ ngwá ọrụ
1 Nüüd pole veel midagi sellist, nagu häkkida Ngwaọrụ?
1.1 1 – Marcus Howard
1.2 2 – Aaron Rosen
1.3 3 – Randy Mitchelson
1.4 4 – Vladimir Gendelman
1.5 5 – David Krauter
1.6 6 – Dennis Seymour
1.7 7 – Janice Wald
1.8 8 – Dan Janal
1.9 9 – Richard G Lowe Jr.
1.10 10 – Dave Attard
1.11 11 – Cyril Nicodeme
1.12 12 – Brian Jackson
1.13 13 – Marcin Zaba
1.14 14 – Melissa Egwu
1.15 15 – Adam Benzion
1.16 16 – Warren Whitlock
1.17 17 – Rafi Chowdhury
1.18 18 – Sorin Amzu
1.19 19 – Michael Pozdnev
1.20 20 – Mike Kawula
1.21 21 – Todd Worley
1.22 22 – Dave Schneider
Tagasi ọ bụla ibu häkker bụ ngwá ọrụ
Maka ndị na-azụ ahịa na-achọ ụzọ ha ga-esi mezuo mmụba ha na-eme atụmatụ ha, ha kwesịrị ịma maka ngwá ọrụ ndị na-eme ka usoro a nwee ike. Ịzụlite ma mejuputa usoro ị ga-esi kwụsị mbanye gị bụ otu ihe; iji ngwanro ma ọ bụ ngwá ọrụ iji rụọ ọrụ ụfọdụ n’ime usoro ndị ahụ na usoro gị bụ ihe ọzọ.
ỌỌụụieieịịịweweweweweweweckingckingckingckingckingckingcking ckingckingckingckingckingckingckingckingckingỌckingckingckingckingckingckingckingckingckingckingckingckingckingckingcking Ebumnuche nke ngwaọrụ ndị a bụ ime ka ọrụ gị dị mfe karị ka ma wee nwee ike ilekwasị anya n’ịme ihe ndị dị mkpa maka azụmahịa gị.
Yabụ, ọ bụrụ na inwetara ọgbụgba egwu ha etolite etolite ma ọ bụ opekata mụta otu esi aga n’ihu n’inwe uto azụmahịa gị, ihe ị ga – achọ ugbu a bụ ngwá ọrụ ga – emecha ihe egwure.
N’okpuru ebe a, ndị na-azụ ahịa na ndị ahịa na-esonyere gị uto ha na-emepụta ngwá ọrụ ndị dị na ha bụ ndị pelgalt ka azụmahịa ha baawanye na-aga ngwa ngwa.
Tupu ị na-agagharị na post ahụ, azịza ị ga-ahụ ga-ekpuchi ngwaọrụ na ngwa dịgasị iche icke nke nyere ha aka ịbawanye ngwa ahịa ha ngwa ngwa. Jah, na-atụ anya azịza dịgasị iche iche nke na-enye echiche ndị na-adọrọ mmasị banyere otu onye ọ bụla n’ime ndị na-aza ajụjụ si eto ha.
Nüüd pole veel midagi sellist, nagu häkkida Ngwaọrụ?
1 – Marcus Howard
Pịa ebe a ịkekọrịta azịza nke Marcus!
2 – Aaron Rosen
Pịa ebe a iji kọọrọ Erọn azịza ya!
3 – Randy Mitchelson
Pịa ebe a ịkọrọ Randy azịza ya!
4 – Vladimir Gendelman
Pịa ebe a iji kesaa azịza Vladimir!
5 – David Krauter
Pịa ebe iji keta ihe Devid zara!
6 – Dennis Seymour
Pịa ebe a ịkekọrịta Dennis!
7 – Janice Wald
Pịa ebe a iji kọọrọ Janice azịza ya!
8 – Dan Janal
Pịa ebe a ịkekọrịta azịza Dan!
9 – Richard G Lowe Jr.
Pịa ebe a ịkekọrịta azịza Richard!
10 – Dave Attard
Pịa ebe a ịkekọrịta azịza Dave!
11 – Cyril Nicodeme
Pịa ebe a iji kesaa azịza nke Cyril!
12 – Brian Jackson
Pịa ebe a iji kesaa ihe Brian zara!
13 – Marcin Zaba
Pịa ebe a iji kesaa azịza nke Marcin!
14 – Melissa Egwu
Pịa ebe a iji kesaa azịza Melissa!
15 – Adam Benzion
Pịa ebe a ịkekọrịta azịza Adam!
16 – Warren Whitlock
Pịa ebe iji kesaa azịza Warren!
17 – Rafi Chowdhury
Pịa ebe a iji kesaa azịza Rafi!
18 – Sorin Amzu
Pịa ebe a iji kesaa azịza nke Sorin!
19 – Michael Pozdnev
Pịa ebe a ịkekọrịta azịza Michael!
20 – Mike Kawula
Pịa ebe a ịkekọrịta azịza Mike!
21 – Todd Worley
Pịa ebe a ịkekọrịta azịza nke Todd!
22 – Dave Schneider
Nwelite: Dave anaghịzi agba ọsọ Ninja, mana oli sama kui ịchọta ya oberechurn.io na daveschneider.me.
Onye nlekọta ọrụ nlekọta na Jane Jackson onye nchịkwa / Twitter – LinkedIn
Achọpụtala m na mgbe a bịara n’ịzụlite häkkimine, e wetụtụ ụzọ isi mee ka azụmahịa ghara ịzụlite n’enweghị ezigbo ego na mgbasa ozi.
Otu n’ime ụzọ m si azụlite ahịa m bụ site na mmekọrịta mmekọrịta – m na-ekwusi ike mgbe nile na m na-enye uru mgbe ọ bụla metụtara mmekọrịta ma ọ bụ mmekọrịta mmekọrịta na ihu na ihu. Netwọk gị na aha gị bụ igodo gị maka ịga nke ọma.
M na-eji ma abụọ LinkedIn na Facebook iji zụlite mmekọrịta siri ike iji hụ na ndị mmadụ mara m, mgbe ahụ nwee mmasị na ihe m na-eme na n’ikpeazụ iji tụkwasị obi na m ga-enyefe nkwa m iji nye ha nnukw ọrụ.
Otu ụzọ dị mma isi mee nke a bụ ịmepụta obodo ma ọ bụ ebo ebe ị na-enye uru, njikọ dị mma na nkwado ma mee ka agbụrụ gị kwado ibe gị.
Amalitere m otu ìgwè na Facebook ka ha nye ndị na-achọ ọrụ na ndị na-agbanwe ọrụ na ndị na-atụle ịbanye n’ahịa. N’ime ọnwa ole na ole, obodo ahụ etinyewo aka ma kwuo nchegbu ha, olileanya ha, atụmatụ ha na ihe mgbaru ọsọ ha.
Nke a, n’aka nke ya, na-haritud naocha na ebe nrụọrụ weebụ m, ịchọ ịmata ihe niile m na-arụ ma na-akpọ maka mkparịta ụka na ntinye nyocha na gbakwunyere ahịa nke ngwaahịa na ulo ntan ntan.
Ọ dịghị onye ga-azụ gị ma ọ bụrụ na ha amaghị gị, jiri oge wepụta oge iji wuo obodo nke ndị na-agba ọsọ!
Tegevjuht nke Nkụzi Ntanetị / Twitter
Ọkachamara azụmahịa m kacha amasị m bụ Google. Google’i saidi NXXXXX sachasi ewu ewu na intanet ma jiri ya iji kpoo uzo bu nahe adighi nma. Ee, ma ei ole kunagi veel seda teinud, aga ga-esi nweta ya. Ote ihe atọ bụ iji Google maka nyocha ahịa.
ji NggụụỌỌụụụụ Googleụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụ ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ma ma ma Saidi andmed puuduvad, kuna nad on kõik SEO otsingumootorid, aga ka need, mis on olemas, on olemas.
Tegevjuht na Bido onye na-agba ọsọ / Twitter – LinkedIn
Ọkachamara kachasị amasị m na-arụ ọrụ ngwá ọrụ n’oge ahụ bụ MissingLettr. Sait na mmekọrịta ọha na Lake, aha egwuregwu ahụ ga-anọrịrị na nri. Nke ahụ adịtụbeghị mfe, na nnweta mgbasa ozi na-abụ ihe kachasị mkpa maka otu mmekọrịta mmadụ na ibe ya si egosipụta ọdịnaya gị, ọ na-emewanye ike.
Ihe m hụrụ n’anya gbasara MissingLettr ei ole enam nii pikk, nagu iga päev, aga ewetara m akwụkwọ ozi zuru oke maka afọ. Ọdịnaya na-agbadata dị ka nke ahụ na-enye m ohere ka mma nke ịhụta ọdịnaya m na mkpọtụ nke ndị na-eme ka ọ dịrị, ọ bụrụgodị na ha anọghị n’ịntanetị n’ge nkeji ‘elu.
Onye isi ala & onye nchoputa na Frugl / Twitter – LinkedIn
Ọkachamara kachasị amasị m na-emepụta ngwá ọrụ ga-abụ na a na-enwe hashtag #journorequests on Twitter ma ọ bụ, ọbụna ka mma, ịbanye na JournoRequest onye na egbochita hashtag ubochi maha otbo mau na na ebbochita -e. Ejirila m ụzọ dị iche iche na ntanetị na ntanetị dị na ntanetị n’ụdị mbipụta profaịlụ dị elu dị ka The Telegraph, The Times, Evening Standard na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ka ọ na-aghọwanye ewu ewu, ọ chọrọ ịbụ nke mbụ ịza nsị nke ndị nta akụkọ na ndị na-ede blfgọ biputere na-achọ ndị ọnụ na-ekwuru maka akụkọ ha mana dịka m nwere -abịakwute m. Twitter, n’ozuzu, bụ otu n’ime ụzọ kachasị mma iji ruo ndị mgbasa ozi na maka onye ọ bụla na-eche etu esi erute otu mgbasa ozi mgbasa ozi, ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri mbụ m na-akpọ.
Dankorita nwy na nwanyi naddi jawu di n’etiti MajWismann.com / Facebook – Twitter – Instagram
Ihe kachasị mma m ga-eji arụ ọrụ m bụ ngwá ọrụ a na-akpọ TinyRanker. Rank bụ ngwá ọrụ na-enyere gị aka ịchọta ebe ị nwere na otu isiokwu na onye nọ na mbụ 10 paremusjärjestust. Maka m,, dị oke mkpa na ndị mmadụ nwere ike ịchọta m n’Ịntanet.
Dị ka onye na-ahụ maka mmekọahụ, ndị mmadụ na-achọ nsogbu nsogbu ha nwere – ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịchọta m, enweghị m ọrụ. N’ihi ya, m na-eji ngwá ọrụ na-agbaso ọnọdụ m na mgbe m na-emepụta ihe ntanetị ọhụrụ. Enwere mike ịlele ndị dị nabe otbe na Google iji hụ ihe m nwere ike ime karịa ha na ụzọ ahụ na-aga n’ihu. M ennäe ike ịgbaso otú ọkwa m si dị mma ka oge na-aga.
Tegevjuht na Ideeintegratsiooni Co.. / Twitter – Instagram
Echere m na ngwá ọrụ bụ ihe ntanye na ndị mmadụ na-adabere na ha nke ukwuu. See on nzuzo na-eto eto bụ ịbanye na onye ahịa gị ma gwa ha ka ha kpọta ndị enyi ha na ndị enyi ha.
Facebook Mgbasa ozi na ngwaọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ mana ike nke ntinye aka site n’aka onye ndụmọdụ na-atụkwasị obi ga-agbanwe dị elu karịa mgbasa ozi ma ọ bụ ngwá ọrụ. Dabere na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ị nwere ike ịhụ uto hokikepi sait na ị na-ezigara ndị ahịa gị ozi ma na-ajụ ha ma ọ bụrụ na ha nwere obi ụtọ na ha ga-agwa mmadụ banyere ya. Inyekwuo ndi mmadu (ego ma o bu ogo gi dika ugbo ikuku na-eme ka i buru ugbua na ugbua) nwere ike me kae i nile me ngwa ngwa.
Veebiturunduse strateeg, C2 Interneti-turunduse strateegiad / Twitter – LinkedIn
Otu n’w nọwá ọrụ kachasị amasị m maka ịbawanye aka bụ site na ịmepụta vidiyo. Vidiyo na-aga n’ihu na-eto eto ma na-egosiwanye nke ọma na akụkọ gị na ntanetị. Enwre m mmasị iji pro versiooni nke Ripl tegi mkpanaka iji kụziere ma ọ bụ ue usoro nhazi.
Ripl na-enye gị ohere ịmepụta vidiyo dị mkpirikpi ma ọ bụ na-enweghị ụda ma ọ bụ na-enweghị ụda olu nke Lake ma ọ bụ olu nke gị, na-enye aro maka atọ dị iche icu maka postitused ụ ah, ei, vaata, siin on kõik ịnụọgụ nke vidiyo gị. ụdị dị iche iche (Facebook, Instagram, na Twitter). Mgbe na-eji ya eme ihe na-agbanwe agbanwe, Ripl ejirila okpukpu okpukpu abụọ gbakọọ aka.
nchoputa Äriturunduse mootor / Twitter – LinkedIn
Ụzọ kachasị mma ị ga-esi jupụta gị n’ụlọnga bụ sait na e-posti ntanetị. Nke a bụ aka ụzọ dị mfe na nke dị irè iji na-enweta ozi ọhụụ mgbe niile. Kao wee nwee ihe ịga nke ọma, ọ dị mkpa ka ijide n’aka nazi ọ bụla bụ ahaziri onwe ya ma nye onye natara ya ozugbo.
Ükskõik, kas äriturunduse mootoril on eneses ndị ahịa anyị aka ịmepụta ozi ịntanetị dị irè na ngwaahịa anyị Copywriter Taa.
Usoro nhazi bụ:
Zipụ nadedeta nke 50 ndị mmadụ na nišš gị
Kpọọ ndị niile na-emepe ozi ahụ
Gbanyere ndị na-adịghị emeghe
N’iji ụzọ a ịwere ike iru 250 maka atụmanya echekwara otu izu ma ọ bụrụ na onyinye gị na oyiri ya ziri ezi, we re ụ ụịụ anya inwe nhazi 5-10 kwa izu site na nke a.
E-post Külm bụ ngwaọrụ kachasị mma maka azụmahịa ọ bụla na-achọ ka eto eto.
Uto bụ nne nke ihe niile mepụtara. Ọ bụghị otú a ka okwu ochie
Uto bnne nke ihe niile mepụtara. Ọ bụghị otú a ka okwu ochie si
25 خطوط ويب ويب رائع kwaWebsite Yenyu
Kumaha Jieun hiji Dina-Post Gambar Galeri auf WordPress
25 Handpluk vaste eiendomme WordPress-temas
Zusammenfassung: 13 wunderschöne handverlesene Bootstrap-WP-Themen von Template Monster
Google AdSense’i lisamine WordPressi
70 generadors web útils per a desenvolupadors intel·ligents / pereços